Dadku waxay dooranayaan magacyo la aamini karo laakiin suuq-geeyayaal jiidaya ololayaal summadeed | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Dadku waxay dooranayaan magacyo la aamini karo laakiin suuq-geynayaasha ayaa jiidaya ololayaasha astaanta
Dadku waxay dooranayaan magacyo la aamini karo laakiin suuq-geynayaasha ayaa jiidaya ololayaasha astaanta
Suuqgeeyayaashu ma inay maalgeliyaan ololayaasha ugu sarreeya ama xayeysiinta waxqabadka hadda? Su'aashaas ayaa si aad ah looga doodayaa meelo badan, oo ay ku jiraan warbixinnada dakhliga ee waaweyn halkaas oo waxqabadku u muuqdo inuu guulaysanayo. (Waxaanu ka doodi doonaa sare vs. hoose ee suuq-geynta mandiqadda berrito Toos ah oo leh Dhul Mashiinka Raadinta.)
Samaynta kiiska sumadda. Xogta cusub ee macaamiisha ee ka timid Survata ayaa ka dhigaysa kiis adag suuq geynta sumadda waxayna ku doodeysaa in noocyada la aamini karo ay guuleystaan ​​inta lagu jiro aafada. Sahanku waxa kale oo uu ka kooban yahay natiijooyin xiiso leh oo ku saabsan fariimaha la diro iyo waxa ay macaamiishu rabaan inay ka maqlaan noocyada hadda jira.
Survata ayaa 1,016 qaangaar oo Maraykan ah ka codsatay habdhaqanka wax iibsiga iyo waxyaabaha laga filayo. Shirkaddu waxay door xoog leh ka heshay summadaha la aasaasay marka loo eego sumadaha gaarka ah ama noocyada guud ee dhawr qaybood oo badeecado ah. Tani waxay u muuqataa ugu yaraan qayb inay khilaafsan tahay mid kale oo ka mid ah natiijooyinka sahanka: ku dhawaad ​​​​saddex meelood laba meel (64%) macaamiisha ayaa hoos u dhigaya kharashaadka si weyn.
Doorbida calaamadda inkastoo kharashka la dhimay. Sida laga soo xigtay Survata, "Xillliyadii hore ee hubin la'aanta dhaqaale, alaabooyinka guud ayaa si fiican u shaqeeyay marka la barbardhigo magacyadooda magac-yaqaanka ah sababtoo ah macaamiishu ma rabaan inay bixiyaan qiimo lacageed." Taasi uma eka inay run ka tahay tusaalahan aan horay loo arag, in kasta oo ay hoos u dhac ku yimaad kharashaadka macaamiisha.
Qaybo badan oo alaabta (alaabada nadiifinta, cuntada la qaboojiyey, kafeega, soodhaha iyo cuntooyinka baakadaysan) macaamiishu waxay muujiyeen inay aad ugu dhow yihiin inay doortaan noocyo caan ah. Daawooyinka aan dhakhtar qorin iyo alaabta daryeelka shakhsi ahaaneed, si kastaba ha ahaatee, dhagaystayaashu si siman ayaa loo qaybiyay iyada oo boqolkiiba waxoogaa ka sarreeya ay dooranayaan noocyada guud ama dukaamada, malaha si ay lacag u badbaadiyaan.
Macaamiishu waxay noqonayaan kuwo taxaddar leh, oo doorta. Sahanno dhowr ah oo dhowaan la sameeyay ayaa muujinaya in macaamiishu ay joojinayaan ama ay daahiyeen wax iibsiga jawiga dhaqaale ee hadda jira. Tani maaha wax lama filaan ah laakiin wali waa mid walaac leh sababtoo ah kharashka macaamiisha ayaa kaxeeya 70% GDP US sidaas darteedna waxay muhiim u tahay soo kabasho kasta. Survata waxay heshay afar meelood meel jawaab bixiyaasha loogu talagalay inay dhimaan kharashaadka 30% - 40%, mid ka mid ah shantii ayaa sheegay inay dhimi doonaan miisaaniyadooda 50% ama ka badan.
Si ka duwan dhimista kharashaadka macaamilka, dakhliga shirkadda weyn ee teknoolojiyadda iyo xogta sahanka IAB ayaa ka tarjumaysa in kharash-gaynta xayeysiiyayaashu ay soo kabsadeen bishii Abriil taasoo sababtay maalgashadayaasha inay dabaaldegaan. Si kastaba ha ahaatee miisaaniyada ayaa weli ah qorshe gaaban oo ka fog heerarkii cudurka ka hor.
Farriimaha caanka ah macaamiishu waxay rabaan inay maqlaan. Cilmi-baarista Survata waxay sidoo kale sahamisay rajada macaamiisha ee summadaha iyo fariimaha ay rabaan inay maqlaan. Waxaa kaloo jira waxyaabo yaab leh halkan:
Ballanqaadka helitaanka alaabta (36%)
Ballanqaadka shaqaalaha summada (25%)
Ballanqaadka badbaadada alaabta (24%)
U heellanaanta xakamaynta qiimaha/qiimaha (14%)
Marka laga reebo fariimaha, tixgalinta iibsashada kale waxaa ka mid ah qiimaha (dadka laga tirada badan yahay), isha wax soo saarka gobolka (ma waxay ka timid aag fayraska saameeya?) iyo kalsoonida sumadda. Kalsoonida ayaa ahayd qodobka ugu muhiimsan ee saameeya go'aamada iibka 40% jawaab bixiyaasha. Intaa waxaa dheer, macaamiishu waxay hadda 3x aad ugu dhow yihiin inay cilmi-baaris ku sameeyaan alaabada ka hor inta aysan iibsan ka hor inta uusan dillaacin, sida lagu sheegay sahanka.
Madaxa shirkadda Survata Chris Kelly ayaa noogu faallooday iimaylka, “Macaamiishu waxay si cad u garanayaan farriinta astaanta hadda. In kasta oo aan ognahay in macaamiishu ay filayaan in astaantu ay ka jawaabto waqtiyada hadda jira, waxay ahayd wax la yaab leh in macaamiil badan ay dareemeen in waxa ugu muhiimsan ee summadaha ay tahay in ay la xiriiraan iyaga ay tahay ballanqaadka shaqaalahooda. Waxaa laga yaabaa in uu jiro dareen ah 'maraykanka-wada-jir-is-wada-jir' marka aad taas kala soo baxdid, laakiin waxa ay muhiim u noqon doontaa summadaha si ay u cabbiraan dheellitirka khiyaanada leh ee soo saarista fariimaha saxda ah."
Makhaayadaha, fasaxyada iyo dukaamaysiga. Markii la weydiyay halka ay rajaynayaan inay lacag ku qarash gareeyaan marka xiritaanku dhamaado, jawaab bixiyaasha sahanka waxay muujiyeen inay aad u xiisaynayeen inay wax cunaan, oo ay ku xigto fasax iyo wax iibsiga (dukaamada):
Ka cunteynta makhaayad 2:1 margin ka badan #2 safarka
Wax iibsiga tafaariiqda
Madadaalada gaarka ah ama adeegyada daryeelka (gyms, yoga, duugista, timaha, iwm.)
Sababta aan u danayno. Dabeecada macaamiishu waa isbedelaysaa waana in la sii saadaaliyaa hadda. Waxaannu ka soo guurnay qiyaastii lix toddobaad oo shaqo buuxda ah oo ku dhow ilaa 20% shaqo la'aan iyadoo ay in ka badana imanayso. Jeelasha dhaqaale ee noocaas ah waa wax aan hore loo arag.
In kasta oo suuqgeynayaashu ay tahay in ay si fiican wax uga qabtaan qulqulka buuxa, inta badan ma haystaan ​​miisaaniyad. Sidaas awgeed, waxay xoogga saarayaan ololayaasha waxqabadka sababtoo ah kuwaa way fududahay in la raad raaco. Kharash kasta oo aan lagu caddayn karin ROI cad ayaa la jarayaa meelo badan. Laakiin xogta Survata iyo caddaymaha kale waxay muujinayaan in muuqaalka summada laga yaabo inuu aad uga muhiimsan yahay weligii - inta lagu jiro xiisadda iyo, gaar ahaan, marka ugu dambeyntii ay dhammaato.
Si aad wax badan oo dood ah u maqasho iyo sida loo cabbiro ololayaasha summadaha ha moogaanin berrito dhacdo ee Live with Dhul Raadinta.
Weli miyaynu gunta gaadhnay? Waa maxay dakhliyada cusub ee laga sheegayo saamaynta COVID ee xayeysiiska dhijitaalka ah
Behmaster Kingpin: Wareysi lala yeeshay Carl Alexander